Dzidziso Dzinoshamisa dzeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Dzidziso Dzinoshamisa dzeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kunyangwe iyo F-117 Nighthawk Stealth Fighter jet yakatsiviwa zviri pamutemo neF-22 Raptor jet, inoita kunge ichiri kushanda, yakahwanda semakomboti eruzivo. Muchokwadi, nhoroondo yeNighthawk haina chakavanzika.
Kugadzirwa kweNighthawk kwakaitwa muchivande kutanga muna 1975.
Yakatanga kubhururuka muna 1981, asi yaive yakafukidzwa pakavanda, uye veruzhinji havana kuziva nezve ndege kusvika makore manomwe gare gare.
Mushure mekuziviswa kwayo kwekurega basa sezvo yanga ichitsiviwa neiyo Raptor, zvinoita sekunge ndege iyi yanga ichichengeterwa panguva imwechete isiri kunyatsoita basa zvachose.
Iyo Nighthawk yakatanga kugadziridzwa sendege yekurwisa naLokheed Martin mushure mekushanda pahunyanzvi hwekunyepedzera. Kugadzirwa kwevakatungamira, ndege yekuratidzira bvunzo inonzi Ive neBlue, yakaitwa muchivande kubva muna1975.
Muna 1978, iyo F-117A yakaenda mukusimudzira uye yakatanga kubhururuka muna 1981. Asi veruzhinji havana kuziva nezve kuvapo kwayo kusvika zvaziviswa zviri pamutemo makore manomwe gare gare muna 7.
Pakati pa1982 na1988, yekutanga Nighthawk yakaunzwa sendege yekutanga kushandira nyika kuUnited States Air Force (USAF). Inenge iri imwe yendege makumi mashanu neshanu dzenhare iyo USAF yaizogamuchira kuburikidza na59, ichimaka yekupedzisira kuzombonunurwa.
United States Air Force yakatsiva iyo F-117 ne iye F-22 Raptor chirongwa cheF-22 chisati chakanzurwa muna2009. Chakatsiviwa neF-35 Joint Strike Fighter inodhura. Yekutanga gumi pamakumi mashanu nemashanu eF-55 ndege dzaishandira dzakasiya basa muna Zvita 117. Mhemberero yemudyandigere yakaitika paWright-Patterson Air Force Base munaKurume 2006.
Asi maNighthawks haana kuenda. Iwo arikuchengetwa muma hangars panhandare yendege muTonopah Test Range muNevada. Iwo ekupedzisira mana maNighthawks akasvika paTest Range muna Kubvumbi 4, 22. Mapapiro nemiswe yakabviswa kuti ichengeterwe, asi dzimwe ndege dzinogona kukurumidza kuyeukwa kutiza kana zvichidikanwa.
Munguva pfupi yapfuura, iyo Air National Guard yakasimbisa kuti F-117 Nighthawks arikushandiswa mukurovedza muviri, kusanganisira kushanda sevamiririri veanouya makomba emakungwa. Uchapupu hunoratidza kuti kudzidziswa uku kwave kuri kwenguva yakati ikozvino. Nekuti iyo ndege inogona kutevedzera zviito senge zvombo zvekufamba nendege, iwo ipuratifomu yakakwana yeiyo cruise missile yekudzivirira kurovedza muviri.
Iyo Nighthawk inogona kunge iine zita rayo nekuti rinongoshandiswa chete kune husiku-nguva mamishini. Uye pakavanda, pasina mubvunzo, yakapihwa nhoroondo yayo uye kunyangwe iro dema dema, zvichiita kuti zvive nyore kusanganisa mudenga rehusiku. Asi ndiani anoda kusanganisa kana iwe uchigona kunge usingaonekwe kune radar?
Idzo nzvimbo uye kumucheto profiles zveiyo Nighthawk zvakagadziridzwa kuratidza zvine hukasha radar muzvikamu zvakamanikana zvematanda, anotungamirwa kure nemuvengi radar detector. Mikova yese uye ekuvhura mapaneru mundege vakaona-toothed kumberi nekutevera mativi anoratidza radar. Iyo yekunze nzvimbo yendege yakaputirwa neradar-inonamira zvinhu (RAM). Zvese izvi zvinoita kuti zvioneke.
Iyo inozivikanwa zvakare seFrisbee uye iyo Wobblin 'Goblin, iro basa reiyo F-117A Nighthawk ndeyekupinda munzvimbo dzakakomba dzekutyisidzira uye kurwisa zvakakwirira-zvinangwa zvine huchokwadi hwakanyanya. Nighthawk yanga iri mukushanda basa muPanama, panguva yeOperation Desert Storm, muKosovo, muAfghanistan, uye panguva yeOperation Iraqi Rusununguko.
Ndege dzekubira dzinonyanya kuvakwa nealuminium ine titanium yenzvimbo dzeinjini uye masisitimu ekudzimisa.